Ndị na-emepụta igbe kachasị mma Rayson
Na Rayson, Mmelite teknụzụ na ihe ọhụrụ bụ uru anyị. Ebe ọ bụ na o guzobere, anyị na-elekwasị anya na ịhazi ngwaahịa ọhụrụ, imeziwanye ogo ngwaahịa, na ijere ndị ahịa ozi. Boxsping kacha mma anyị ga-eme ike anyị niile ijere ndị ahịa ozi na usoro ahụ dum site na imewe ngwaahịa, R & D, inyefe. Nabata ịkpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ gbasara ngwaahịa a kacha mma igbe ọhụrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ anyị. A ga-egosi na nke a ga-enwe obi ike karịa. Ọ ga-enwe mmetụta dị ukwuu na ọkwa ntụkwasị obi.